Iziqalo ezithobekileyo ezenza iIcon yaseMelika
I-biographie ye- Oprah Winfrey ayiyi kuzaliswa ngaphandle kokujonga ebomini bakhe bokuqala. Impumelelo enkulu kunobomi, udumo, kunye nenhlanhla ayenayo namhlanje akuzange kube lula kwaye kwafuneka anqobe iingxaki ezininzi. Ukuphumelela kwakhe kukukhuthaza abaninzi, kwaye kulula ukubona indlela ebuntwaneni bakhe abumba ngayo umfazi owayeza kwaziwa emhlabeni jikelele.
Ngaphezulu nje kwendlela yokubonisa intetho nje, u-Oprah ngumdlali we-winner nomvelisi, umxhasi weendaba, kunye nomncedisi.
Abantu abaninzi bayimbala phakathi kwabasetyhini abaneempembelelo kumazwe ngamazwe.
Njengomntu ophumelele impumelelo, ibali lika-Oprah Winfrey lifanele liqale kwindawo ethile. Kwimeko yakhe, kwakungama-1950-i-Mississippi.
Ubomi be-Oprah bokuqala eMississippi
I-Oprah Gail Winfrey wazalwa ngoJanuwari 29, 1954, eKosciusko, Mississippi. Unina, uVernita Lee, wayeneminyaka eyi-18 ngelo xesha, kwaye uyise, uVernon Winfrey, wayeneminyaka engama-20.
Ngoxa u-Oprah wayeselula kakhulu, uVernita wathuthela enyakatho eMilwaukee, eWisconsin, ukufumana umsebenzi. Waceba ukuhambisa intombazana yakhe apho emva kokufumana umsebenzi. Okwangoku, u-Oprah wahlala kwifama yaseMississippi kunye nogogo wakhe uHattie Mae Lee.
Ugogo ka-Oprah wamkhuthaza ukuba amthande iincwadi ngokumfundisa indlela yokufunda eneminyaka eyi-3. Waqala ngokufunda iBhayibhile kwaye kungekudala waqala ukuthetha ebandleni lakhe. Kamva, wayedla ngokuphindaphindiweyo iindinyana kubahlobo bakagogo.
Xa u-Oprah waphenduka ngo-5, waqala ukulisa.
Ekubeni sele sele ekwazi ukufunda nokubhala, wanyuswa ngokukhawuleza waya kwibanga lokuqala.
I-Oprah iya eMilwaukee
Uneminyaka engama-6 ubudala, ugogo kaOprah wagula. Le ntombazana yayithunyelwa ukuba ihlale kunye nonina nodadewabo-ntombi, uPatricia, emzini waseMilwaukee. Nangona uVernita esebenza njengezindlu zokuhlambulula izindlu, kwakukho amaxesha apho kwakufuneka athembele kwinhlalakahle ukuxhasa intsapho.
Umsebenzi wakhe wamgcina exakeke kakhulu, yaye yintoni na ixesha elincinci eliye lafumana ngayo abantwana bakhe basebenzisa uPatricia.
Emva kweminyaka engaphezu kweyodwa eMilwaukee nonina, u-Oprah wathunyelwa ukuba ahlale noyise nonina, uZelma, eNashville, eTennessee. Babenwabile ukuba baneminyaka engama-7 ubudala abahlala nabo kuba babengenako abantwana babo. Ekugqibeleni, i-Oprah yayiyakonwabela amava okuba neyakhe ibhedi kunye negumbi lokulala.
U-Oprah ubhalise kwiWharton Elementary School kwaye wavunyelwa ukuba weqa ibakala kwakhona. Umxhasi wesithathu wayevuyiswa kukuba abazali bakhe bamthabatha kwithala leencwadi kwaye baxabisa imfundo yakhe. Intsapho yayiya rhoqo ecaweni, kwaye i-Oprah yafumana amathuba amaninzi okuthetha koluntu, nangona kulutsha.
Emva kokugqiba ibanga lesithathu, uVernon wabuya waya eMilwaukee ukuba atyelele unina. Ngethuba elivela kwi-Oprah ekhohlo, uVernita wayebelethe umntwana onyana ogama linguJeffrey. Abantwana abathathu babela igumbi kwigumbi lokulala lamabini.
UVernon wabuyela ekwindla ukuthatha u-Oprah kwakhona eNashville, kodwa wakhetha ukuhlala nonina waza waqala ibanga lesine eMilwaukee. Xa unina wayengabikho, u-Oprah wabuyela kumabonwakude kwenkampani kwaye waba neengcinga zakhe zokuqala zokuba udumo ngolunye usuku.
Amava ka-Oprah Ngezobisi zoSondo
U-Oprah wayeneminyaka eyi-9 ubudala xa waqala ukuphathwa kakubi ngesondo. Ngoxa wayesebenzela abantwana bakaVernita, umzala ka-Oprah owayeneminyaka eli-19 ubudala wadlwengula, wamkhupha ice cream, wamxelela ukuba ayigcine imfihlelo. Wenza, kodwa oku akuyi kuba siphelo.
Kwiminyaka embalwa elandelayo, wayeya kujongana nokusetyenziswa kakubi komhlobo osapho kunye nomalume. Wahlala ethule malunga nayo yonke iminyaka.
I-Oprah iya kwiSikolo esiphakeme saseNicolet
I-Gene Abrams, omnye ootitshala be-Oprah kwiLincoln Middle School kwisixeko saseMilwaukee, waqaphela uthando lwakhe lokufunda. Wathatha ixesha lokumnceda ukuba atshintshele kwisikolo sonke esimhlophe e-Glendale, eWisconsin. Omnye unokulindela ukuba ukuba ngumfundi kuphela wase-Afrika-waseMelika kwiSikolo esiphakeme saseNicolet kwakungelula. Nangona kunjalo, u-Oprah kamva wathi, "Ngowe-1968 kwakuyindawo yokumazi umntu omnyama, ngoko ndandithandwa kakhulu."
Buyela e-Nashville kunye noMama okhulelweyo
U-Oprah wayengenakukwazi ukuthetha ngokunyanzeliswa kwakhe ngokwesondo kunye nonina, kwaye uVernita akazange anike isiqhelo esincinci kulutsha. Ngenxa yoko, i-Oprah yaqala ukusebenza. Wayeza kudlula isikolo, umfana onomhla, athathe imali kumama wakhe, aze abaleke. UVernita wayengenakukwazi ukuphatha le mpawu ixesha elide, ngoko u-Oprah wabuyiselwa eNashville ukuba ahlale noyise.
Xa wayeseneminyaka eyi-14, u-Oprah waqonda ukuba ukhulelwe. Wayekwazi ukufihla le ngxelo kubazali bakhe de ube neenyanga ezisixhenxe. Waya ekusebenzeni kwangaphambili ngaloo mini waxelela uyise ngokukhulelwa. Wanikela umntwana umntwana, owafa ngeveki ezimbini.
I-Oprah Ifumana Emuva KwiNdlela
Utshintsho lwafika malunga no-Oprah oneminyaka engama-16 ubudala xa efunda okokuqala uMaya Angelou, ngokucacileyo, " Ndiyazi ukuba Kutheni Inyoni Yogqobhozi Inomsindo ." Yashintsha umbono wobutsha, kwaye kamva wathi, "Ndiyifunde ngokuphindaphindiweyo, ndingakaze ndifunde incwadi eqinisekisile ukuba khona kwam." Kwiminyaka emininzi kamva, uDkt. Angelou uya kuba ngumnye wabangane abathandekayo baka-Oprah.
Eli thuba latshintshile umbono wakhe, kwaye waqala ukubuyisela ubomi bakhe kwindlela. Wayegxila kwimfundo yakhe waza wabuyela ekukhulumeni koluntu, italente eya kuqala ukuthabatha indawo yakhe. Kwaqala ngowama-1970 xa iphumelele ukhuphiswano lokwintetho kwiklabhu yakwa-Elks Club. Umvuzo wawuyiminyaka emine yokufundela iikholeji.
I-Oprah YokuQala kokuQala kwi-Journalism
Ngomnyaka olandelayo, u-Oprah wakhethwa ukuba eze kwiNkomfa ye-White House ye-White House yase-Colorado. Wayemela iTennessee kunye nomnye umfundi.
Emva kokubuya kwakhe, isiteshi somsakazo se-WVOL sikaNashville sicele udliwano-ndlebe nentombazana enomdla.
Oku kwaholela kwelinye ithuba xa isikhululo samcela ukuba abamelele kwi-Missing Prevention Prevention. I-Oprah yaba ngowokuqala wase-Afrika-waseMelika ukuphumelela ukhuphiswano.
I-Oprah yokuqala yamava kwi-journalism yayiza kuvela kwisikhululo sikhululiwe. Emva kobuhle bekhasi, wamkela isipho sokuva ilizwi lakhe kwi-tepi. Umntu okhulayo wayengumntu woluntu ukuthetha, ngoko ke kwakungokwemvelo ukwamukelwa, okwangoku kukhokelela kwithuba lokufunda iindaba.
Ngeminyaka eli-17 nje ubudala, u-Oprah waphelisa umnyaka wakhe ophakamileyo wesikolo esiphakamileyo kwirediyo. Wayefumene i-college full college, kwaye ikamva lakhe lalikhanyayo. Wayeya kwiYunivesithi yeSixeko yaseTennessee, abe nomnxeba u-Miss Black Tennessee ngo-18, kwaye aqhubeke nokwakha umsebenzi ophumelelayo kumaphephandaba .
Bambalwa "iMfutshane yokuYinqoba" iMidlalo yeMidlalo yokuzama
5 Iindlela ezilula zokufunda Ukubonisa umdlalo weMidlalo
Ziziphi i-DSM RC Controllers kunye nabamkeli kunye Nento abayenzayo?
I-Rocky Marciano - Ingxelo Yomsebenzi
Ukusebenzisa iiNgxowa-ndlebe zengqesho
Ngaba Ukukhipha Isisu Kusemthethweni Kuwo Wonke Amashishini?
Indlela Yokuvakalisa 'Frohe Weihnachten' ngesiJamani
I-Clubhead Lag: Yintoni ekhoyo kwiGolfu Swing + Drills ukukunceda ukuba uyive
IJografi yeFlorida Keys
10 Iingcebiso zokuBhala kwii-Essays ze-Master SAT
Ixesha leMfazwe yase-Algeria ye-Independence
Ngaba Unokuba Ngamaqabunga Okuninzi Kweqhwa?
Isigama sokubhala iiNcwadi zoShishino
I-Virgo ne-Aquarius: Uthando oluhambelanayo